Maalin: Janaayo 6, 2020
Ekrem Yüce, Duqa Magaalada Sakarya ee Magaalaga Weyn, ayaa la yimid saraakiisha TÜVASA and waxayna wada shaqeeyn ka sameeyeen nidaamyada tareenka fudud ee la doonayo in laga dhiso Sakarya. Duqa Yüce wuxuu yiri, ası Xaqiiqada ah in warshad weyn sida TÜVASAŞ ay ku taal magaaladeena [More ...]
P & O fferrymasters maanta, sababtoo ah saadka digsiga-Yurub adeegyada Turkey sii ballaarinta ee Asia labadii sano ee soo socda, waxa uu ku dhawaaqay qorsheyaal uu u furo shan xafiis oo cusub. P&O Ferrymasters, marka lagu daro saldhiggeeda ay ku leedahay Istanbul, [More ...]
Ankara-Sivas inta u dhaxaysa 2 saacadood iyo 30 daqiiqo waxay yareyn doontaa Jidka Dariiqa 405 Km inta u dhaxaysa mashruuca Ankara-Sivas YHT wuxuu sii wadaa si xawli ku socda. Mashruuca Ankara Sivas YHT 300 oo qof 7/24 maalin iyo habeen [More ...]
Maareeyaha guud ee TCDD iyo waftigii la socday iyaga oo raacaya tareenka markay ahayd 09.00:21 subaxnimadii Samsun ilaa Sivas (Thick) jihada. Aasaasihii of the Leader Great Mustafa Kemal Ataturk ee Republic of Turkey on September XNUMX, [More ...]
Turkey baabuur Industry Corporation (TÜVASAŞ) hoos u qalma Project Railway Qaranka in ay ka qayb musharixiinta imtixaan afka ah in la shaqeeya, taariikhaha imtixaanka afka, jeer iyo meesha imtixaanka gelitaanka waayo dukumentiyada [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu si loo wanaajiyo isboortiga xilliga qaboobaha iyo dalxiiska jiilaalka ee gobolka Ordu wuxuu soo qabanqaabiyay xaflad sled ah oo ah 3 wado oo kaladuwan. Bandhig-jeex jeexan oo ay soo qabanqaabisay Dawladda Hoose ee Magaaladda ayaa lagu qabtay magaalada Ordu markii ugu horreysay; [More ...]
Duqa Magaalada Magaalada Caasimadda ah ee Muğla Tilmaanta uu siiyay Cusmaan Gürün, waxaa la hirgeliyay ozitif Takoor wanaagsan oo Haweenka ku saabsan Gaadiidka uygulam. Marka loo eego dalabka, rakaabka dumarka ee Muğla waa 22.00 xilliga qaboobaha iyo 06.00 xagaaga. [More ...]
Nidaamyada laydhka korantada ee LED-ga ayaa lagu rakibay istaagida dadweynaha ee adeegsadayaasha gaadiidka dadweynaha. Sidan, muwaadiniintu waxay awoodi doonaan inay ku sugaan gawaaridooda qaab nabdoon oo raaxo badan. Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu bayaan ku saabsan Kanal İstanbul ka sheegay bayaannada wadajirka ah ee CNN TKRK-Kanal D. Oğ Haddii aannaan helin dhaqaale, waxaan ku samayn doonnaa miisaaniyadda qaranka, ayuu Erd Erdogan ka yidhi Mashruuca Kanal Istanbul. channel [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu caddeeyay in sumadda gaariga maxalliga ahi tahay “tulip ında barnaamijka” Si gaar ah ula leeyahay Madaxweynaha Kanal oo ay si wada jir ah u baahinayaan telefishanka Kanal D, CNN Türk. Turkiga Erdogan la weydiiyay sida ay u qiimeeyaan gaariga, "saaxiibbo ugu horeysay [More ...]
Halganka looga soo horjeedo mashruuca jidadka ee dadka deggan Kırkpınar Neighborhood ee degmada Sapanca ee Sakarya wuxuu socday muddo 120 maalmood ah.Hayadaa Hazal Ocak oo ka soo baxa Wargeyska Cumhuriyet; Deggeneyaasha guud ahaan xarunta hoose ee gawaarida fiilooyinka illaa Sannadka Cusub [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank, Afyonkarahisar Iscehisar Marble Gaarka ah Aasaasiga Aagga Wershadaha (OIZ) ayaa laga helay xarumaha warshadaha. Wasiirka Varank, baaxadda booqashadiisa Demmak Demireller Warshadaha Warshadaha iyo Ganacsiga Inc. [More ...]
Taageerada “Tareenka Xawaaraha Sare ah ee Ka Gudba Düzce” Ololaha Saxiixa ee ay billaabeen Golaha Haweenka Magaalada Düzce ee Golaha Dukaamaysiga maalinta ugu dambeysa ee 2019 ayaa sii kordheysa. Ku dhawaad ​​4 kun oo saxeex ah 40 maalmood gudahood [More ...]